Image – Heemaal News Network
Ciidamada booliiska magaalada Baydhabo ayaa maanta xoog ku joojiyay banaan bax lagu taageerayay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) oo kamid ah Musharaxiinta Madaxweynaha Koonfur Galbeed. Dad badan oo taageersan Musharax Abuu Mansuur ayaa maanta […]
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre iyo madaxa hay’adda DFID ee Soomaaliya Phil Evans ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday shan milyan oo dollar oo lagu tageerayo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada, gabdhaha. […]
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Sareeye gaas Daahir Aadan Cilmi Indha-qarshe ayaa dhaliil xoogan usoo jeediyay Hogaanka saadka ee ciidanka Milatariga Soomaaliya oo lagu eedeeyo in ay bixiyaan dareeska ciidanka . Indha Qarshe oo ka hadlayay […]
Sacuudiga Oo Ogolaaday Shuruuda ay Xuutiyiinta Yeman ku Xidheen Wada-hadalada Lagu soo Afjarayo Colaada Yeman.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Britain Jeremy Hunt oo booqasho ku tagay Boqortooyada Sacuudiga iyo Imaaraatiga ayaa sheegay in dhinaca Sacuudiga ay aqbaleen mid kamid ah sharuudihii xuuthiyiinta ku xireen in wadahadalka bilowdo. Xuuthiyiinta ayaa dalbaday […]
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) ayaa isku-shaandheyn kooban ku sameeyay golihiisa wasiirada. Wareegto goor dhow ka soo baxday xafiiskiisa ayaa lagu magacaabay Wasiir, wasiir-ku-xigeenno iyo Wasiiru-dowlayaal, iyadoo qaarkood xilalka loo kala bedelay. Wasiirka […]
Taliska Qeybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ee ka Howlgala Deegaanada Dawlad goboleedka Galmudug ayaa Maanta ku baxay Deegaanka Hardis oo qiyaastii 25 KM Dhanka Galbeed kaga beegan Degmada Balambal, kaasi oo dhowaan Dagaal uu […]
Waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulan ku yeeshay qaar kamid ah Musharaxiinta xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wafdi ka socday Qaramada Midoobay. Ku xigeenka Ergeyga gaarka ah ee […]